नेपालका लागि सङ्घीयता कति ठीक ? | चितवन पोष्ट
नेपालका लागि सङ्घीयता कति ठीक ?
देशलाई सङ्घ र एकाइमा बाँड्नु सङ्घीयता हो । सङ्घभित्र सिङ्गो राष्ट्र अर्थात् केन्द्र रहन्छ । एकाइमा प्रदेश र स्थानीय निकायहरु पर्छन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा सङ्घीयता भनेको देशलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर शासन गर्ने पद्धति हो ।
विश्वका करिब २८ देशहरुमा सङ्घीयता छ । तर, ती देशहरुमध्ये थोरैले मात्र प्रगति गर्न सकेका छन् । कतिपय देशमा त जाति, भाषा आदिको कुरो उठाएर देशलाई द्वन्द्वमा फसाएका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली नहुँदा प्रदेशमा भएको भद्रगोल, खिचातानीमा सङ्घले हस्तक्षेप नगर्ने हुन्छ । सङ्घीयता भएको छिमेकी राष्ट्र भारतको बिहार प्रान्त लालुप्रसाद यादवको पालासम्म गुज्रिएर बसिरह्यो । नितिशको
पालामा उनले सो प्रान्तअघि उठाउने विभिन्न कार्यक्रम अघि सारे । फलस्वरुप, बिहारमा समेत अहिले विकासको लहर आएको छ । अमेरिका, बेलायतमा भएको सङ्घीयताले उनीहरुलाई बेफाइदा पु¥याएन, फाइदै पु¥याएको देखिन्छ । अहिलेका विकसित देशहरु जहाँ सङ्घीयता छ, त्यहाँ उनीहरुले पछि परेका प्रान्तहरु अगाडि बढाउन केकस्ता योजना, कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो त्यसै गरे । फलस्वरुप, उनीहरुले प्रगति गर्न सक्षम भए ।
देशमा जेजस्तो शासन प्रणाली अपनाइएता पनि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नै जनतालाई सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्नु हो । विसं २००७ सालपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन थाल्यो । त्यति हुँदाहुँदै पनि २००७ मा राजा त्रिभुवनले विधान सभाबाट संविधान बनाउने निधो गरे । त्यतिबेलाको गुटबन्दीले गर्दा २००७ देखि २०१५ को आमनिर्वाचनपश्चात् बल्ल संविधान बनेको थियो । आमनिर्वाचनपूर्व दलगत स्वार्थहरु देखिए । प्रजातन्त्रलाई बलियो र संरक्षित बनाउनतर्फ कसैको ध्यान गएन । विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रले पञ्चायत ल्याए ।
निर्दलीय पञ्चायतमा दलहरु नरहे पनि राजाका भरौटेहरुले राजाको नजिक बनेर फाइदा खाए । विसं २०४६ को आन्दोलनबाट दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएकोले संसदीय शासन व्यवस्था पुनः लागू भयो । पञ्चायतका गतिविधिप्रति तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरलाई समेत चित्त बुझेको थिएन । त्यसैले, नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त गरी दलीय व्यवस्था स्थापना हुन गएको हो । किनकि, २०४६ को आन्दोलनमा चन्द्रशेखरले नेपाललाई मद्दत पु¥याएका थिए ।
नेपालको राजनीति स्थिर नभई उतारचढाव आइनै रह्यो । नेपालमा प्रजातन्त्रको व्याख्या पनि आआफ्नै किसिमले लगाउन थालियो । नेपाली कांग्रेसले मोडल डेमोक्रेसी, पञ्चायतले गाउँ, नगर पञ्चायतलाई प्रजातन्त्रका रुपमा व्याख्या गरे । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा लागू गरेको जनसरकारले पनि जनताले खोजेको जस्तो सुविधा, सहुलियत खासै दिन सकेन ।
छिमेकी ठूला राष्ट्र चीनले सङ्घीयता चाहेन, अर्थात् जातिगत, भाषिक राज्यलाई बढवा दिएन । भारतले सङ्घीयता चाह्यो र यहीसँगसँगै जातीय र भाषिक द्वन्द्वसमेत निम्त्यायो । सङ्घीयताका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्नुपर्दा इथोपियाको जस्तो विकेन्द्रित शासन तर निर्णय भने केन्द्रले नै गर्ने, अस्ट्रेलियामा सङ्घअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षामन्त्री नरहने प्रावधान, क्यानडामा प्रदेशले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्ने, अर्जेन्टिनाजस्तो देशमा एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई नसघाउने, भारतमा भने सङ्घीय सरकारले प्रान्तीय सरकारलाई भङ्ग गर्न सक्ने आदि आआफ्नै प्रकारका कार्यक्षेत्र बनाइएको देखिन्छ ।
नेपालजस्तो विपन्न राष्ट्रले सिङ्गो नेपालको विकासका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्ने बेलामा विभिन्न खण्डमा खण्डीकरण हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता, जातिगत र भाषिक विविधता भएको मुलुक हुँदाहुँदै पनि यसलाई एकताबद्ध गर्नुको साटो टुक्रा–टुक्रामा कित्ताकाट गर्नु कतिको उचित होला ? तपाईं आफैँ सोच्नुस् त ! यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका लागि सङ्घीयता कति ठीक र कति बेठीक भन्ने सवालमा सङ्घीयताबाट पाइने फाइदा तथा बेफाइदालाई तल बुझिने गरी सूचीबद्ध गरिएको छ :
सङ्घीयताबाट पाइने फाइदा
क) आफ्नो प्रदेशमा खेर गइरहेको वा सदुपयोग हुन नपाएका स्रोतसाधन परिचालन हुनपुग्छ ।
ख) समावेशी लोकतन्त्र व्यवहारमा उत्रन पाउँछ ।
ग) केन्द्रमा रहेको अधिकार विकेन्द्रित हुन पुगेर स्थानीय निकायमा आइपुग्छन् ।
घ) आफ्नो प्रदेशको विकास कसरी गर्ने ? सम्बन्धित प्रदेशले नै दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
ङ) राष्ट्रको विकास क्रमिकरुपमा गर्न सजिलो पर्छ ।
सङ्घीयताबाट हुने बेफाइदाहरु
१) देश विभिन्न टुक्रामा खण्डित हुनपुग्छ ।
२) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायले छुट्टाछुट्टै कर लगाई जनतालाई करको बोझ थोपरिन्छ ।
३) जातिगत, भाषिक द्वन्द्व हुनपुग्छ ।
४) केन्द्रमा भएजस्तै प्रदेशमा पनि राजधानी बनाउन, मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकायलगायत थुप्रै संरचनाहरु खडा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५) केन्द्र र प्रदेशमा रहेका मन्त्रीहरुको तलबभत्तालगायत अन्य खर्चहरु अनावश्यकरुपमा गरिरहनुपर्ने हुन्छ, जसबाट देशको विकासका लागि चाहिने पुँजी प्रतिनिधिहरुकै सुविधामा खर्चिनु परेकोले विकास गर्ने पुँजीको झनै अभाव हुन्छ ।
६) स्थानीय निकायका वडा सदस्यलगायत सबैले आफ्नो तलब, सुविधा आफैँ तोकेर खाने गर्छन् ।
७) केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा देश विकासका लागि जनसहभागिता जति जुट्छ त्यति सङ्घीयतामा जुट्न सक्दैन ।
८) सबैले आआफ्नो प्रान्ततिर मात्र ध्यान दिने हुँदा राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा नागरिकहरुका बीचमा ऐक्यबद्धता कायम हुन गाह्रो पर्दछ ।
९) प्रदेशमा राज्यपाल, सभामुखलगायत अन्य आवश्यकीय चाँजोपाँजो मिलाउनमा नै समय खर्चिनुपर्छ ।
१०) केन्द्र र प्रान्तबीच विवाद भइराख्दा प्रदेशले छुट्टै राज्यसमेत माग्न सक्छ ।
माथिको सङ्घीयताको कुरा नेपाली जनताले चाहेका थिएनन् । विसं २०६२÷०६३ को आन्दोलनपश्चात् तराईका मधेसी भाइहरुले भारतको इसारामा सङ्घीयता माग गरे । झन्डै १ वर्षको मधेस आन्दोलनपछि देशका प्रमुख दलका अध्यक्षहरुले मधेसी भाइहरुलाई पहाडिया र हिमाली क्षेत्रमा बस्ने दाजुभाइका बीचमा के–के विभेद भेट्टायौँ भन्दै त्यस्तो विभेद हुन नदिने प्रण गरी हस्ताक्षर गरेर उनीहरुलाई सङ्घीयता हुँदा देशलाई हुने हानिका बारेमा बोध गराउन सकेको भए सायद सङ्घीयता नेपालमा आउने स्थिति नै थिएन ।
यसका बाबजुद उल्टै स्वायत मधेस प्रदेशको घोषणा गर्ने हाम्रा ठूला दलका नेताहरु अहिले सङ्घीयता घाँडो भएको उद्वेग प्रकट गर्छन् । यो त हाम्रो गाउँघरमा ‘हगिसक्यो बल्ल दैला देख्यो’ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको जस्तो छ । ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ परेको छ अहिले । सङ्घीयता नचाहने एउटा सानो दलका नेता मौका पाउँदा झन्डा हाल्दा रहेछन्, त्यतिबेला सङ्घीयता ठीक हुने र अरु बेला बेठीक हुने कस्तो अचम्म !
देशमा अहिले राजनीतिक अस्थिरता देखिइरहेको छ । स्थिर सरकार भएरमात्र हुँदोरहेनछ । पार्टीहरुको गुटबन्दी देख्दा नेताहरुलाई देशप्रति माया कहिले आउला र जस्तो लाग्छ । आफ्नो दुनोमात्र सोझ्याउने काम छ सबैको । महँगी भाषणमा घट्यो/घटेन त्यो थाहा छैन ।
५ किलो आँटामा करिब २५ देखि ३० रूपैयाँ वृद्धि भएको छ । सामानको मूल्य घट्यो वा जनताले सस्तोमा ती माल भेट्टाए, पत्याउन गाह्रै छ । हरेक प्रदेशले आआफ्नै तरिकाले सङ्घीय कानुन आउनुपूर्व नै आफ्नै तरिकाले कानुन बनाई लागु गर्ने गर्छन् । यति ठूला सङ्ख्यामा रहेका प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुकै चाहनाबमोजिम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, भ्रमण खर्च व्यहोर्दा देशको हविगत के होला ?
चुनाव सकिएपछि प्रतिनिधिको दर्शन पाउन निकै कठिन छ । जनताले कहिले राहत पाउला खोइ ? एउटा माघले मात्र जाडो सकिँदैन । भोलि जनताका दैलामा यी प्रतिनिधिहरु मैले यी कामहरु गरेँ तपाईंहरुका लागि भनेर के भन्छन् होला ? जनतालाई सधैँ जाँड, मासुमा बिक्ने नसोच्नुहोला । बरू, चुनाव ताका जनतासमक्ष आफूले गरेको वाचा पूरा गरेको छ÷छैन सोचेर काम गर्नुस्, कुर्सी कसैका लागि सधैँभरि रहँदैन । त्यसैले, जनताको फाटेको टोपी र धोतीलाई राम्ररी हेरी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुस् र गराउनुहोस्, यसैमा हामी सबैको कल्याण छ ।